Uxamu ugeje umgodi kwele-Under 23 lihlazeka kuma-Olympics
Abadlali beqembu laseNingizimu Afrika lika-Under 23, bazobuya kuma-Olympics eTokyo, eJapan, benyobozela, beshwiba izandla, kuphele0 nya ukuzethemba.
Abafana bakuleli bafike bashaya udaka cishe kunawo wonke amaqembu ebhola abekhona eJapan kuma-Olympics kulokhu. EzikaDavid Notoane aziwinanga nowodwa umdlalo kwemithathu eziyidlalile eTokyo.
Leli qembu belibophele abadlali abahle kakhulu futhi bekunethemba lokuthi lingakwazi nokudlulela esigabeni esilandelayo. Okuqapheleke ngeqembu lakuleli ukuthi belenza amaphutha kakhulu emuva, yize like ladlala kahle libhekene neFrance.
Kulo mdlalo iqembu lakuleli lishaye amagoli amathathu kodwa lagcina lidliwe ngo 4-3, ngenxa yakho ukudedela kwalo kalula amagoli.
Nasemdlalweni wokuqala eliwudlale neJapan iqembu lakuleli lavele lahlala emuva, lagcina lenze iphutha, iJapan yashaya igoli umdlalo waphela ngo 1-0.
INingizimu Afrika iye emdlalweni wangoLwesithathu neMexico sekuyisimo esijwayelekile sokuthi kumele kubalwe. Bekumele iwine ngo 3-0 bese ithemba ukuthi iJapan idedela isibhaxu kwiFrance, eye emdlalweni wokugcina wamaqoqo inamaphuzu amathathu.
Ngebhadike amagoli amathathu angene ngakuyona iNingizimu Afrika ebibukeka sengathi iyesaba ukuyozama inhlanhla phambili. Konakale ngesiwombe sokuqala idedela uVega ngomzuzu ka-18 ukuthi ashaye igoli elilula lokuqala.
Ngesikhathi sekubukeka sengathi zizoya ekhefini kungu 1-0 liphinde lasuka ikakade lamaphutha, uRonwen Williams exhimfa ibhola esikhundleni sokulibamba. Ligcine liwele kuLuis Romo olibeke phakathi ngomzuzu ka-45.
Ngesiwombe sesibili izinto zivele zayibhedela kakhulu iNingizimu Afrika ngesikhathi ukaputeni uRepo Malepe ethola ikhadi elibomvu ngomzuzu ka-55, ngenxa yokudlala kabi. Kuphele imizuzu embalwa iMexico yashaya igoli lesithathu ngonyawo lukaMartin.
FUNDA NALA: IChiefs ithumele isexwayiso ngokusayina kwayo izibabuli zabadlali
Ngomzuzu ka-66 iMexico izithole ingasaphelele nayo ngemuva kokukhishwa kukaCarlos Rodriquez ngekhadi elibomvu. Ngemizuzu yokugcina iqembu lakuleli belizama ukuthola igoli lokuvala ihlazo kodwa kwaba wukuthi iMexico seyivalile emuva.
Kuyomele abonge elakubo uNotoane uma engakhonjwanga indlela yiSouth African Football Association (Safa), ngemuva kokushaya udaka olungaka enabo abadlali. Lo mqeqeshi akukho angakhala ngakho ngoba uze wabashiya abanye abadlali abahle, ngendlela ababebaningi ngayo abengakhetha kubona
Previous Previous post: Okwenzeke ngoLwesibili kuthumele isexwayiso ezimbangini zeChiefs
Next Next post: UMiddendorp uncoma izinduku zakhe ezintsha, kuvuselelelwe nabadala